China Outdoor Furniture Manufacturer Hot Kutengesa Rattan Wicker Chair Supplier Aluminium Leisure Living Room Chair Patio Garden Restaurant Kudya kwemanheru Set fekitari uye bhizimisi | Zuva Tenzi
Tambo Patio SwingHot Kutengesa Swing Sachigaro Rocking Chai ...
Wholesale Outdoor Furniture Cheap Yemazuva uno Kumonyanisa Wicke ...
Restaurant Leisure AluminiumBulk Yemazuva Ekugadzira Commer ...
Modern Outdoor Garden Rope rakarukwa pasofa Plastic Pe Rat ...
4-Piece Steel Frame Powder bemhapemha Aluminum Chair Ou ...
Factory Outdoor Customized Furniture 4 zvidimbu Chairs ...
Outdoor Furniture Mugadziri Hot Kutengesa Rattan Wi ...
Factory Wholesale Commercial Design Colorful Vintage ...
Kunze Kwefanicha Mugadziri Kupisa Kutengesa Rattan Wicker Sachigaro Mutengesi Aluminium Leisure Kurarama Kamuri Siti Patio Bindu Rekudyira Kudya kwemanheru Set
Muenzaniso Nha .: WA － 4267
Divi: W57 * D60 * H80cm
Mutengo: SUN MASTER
Mutoro: 780pcs / 40'HQ
Ruvara: zvakafanana nekatalog sekuenderana nechikumbiro chemutengi
Muenzaniso Nha. WA － 4267 Divi W57 * D60 * H80cm
Brand ZUVA TENZI Mutoro 780pcs / 40'HQ
Main Nyaya Aluminium chubhu dia28 * 1.5mmpowder kupfeka, bamboo tarisa kuperaUV inodzivirira PE rattan; Kudzoka uye chigaro zvakarukwa neW8Xt1.3mm PE flat wicker.nhema epurasitiki tsoka pads
Kurongedza 1.Sun Mast akajairwa ekisipoti kurongedza.
2. Maererano nechikumbiro chaicho chomutengi.
1x20 'mudziyo, yakasanganiswa odha inogamuchirwa
sampuro odha iripo
Ruvara zvakafanana nekaralogi sekukumbira kwemutengi
Kushanda resitorendi, hotera, gadheni, nzvimbo yekutandarira, cafe, balcony, patio, pool
Feature Eco-inoshamwaridzika, girini chigadzirwa, UV nemishonga, colorfast, inodzora mvura, zviri nyore kuchengeta uye kutakura
Kunze Kudya Zvigaro, Kupisa Kutengesa Patio Resin Wicker Sachigaro Bindu Rattan Chairs ine Bamboo-aifarira Furemu.
Commercial Standard Yese-yekunze wicker yekunze cheya yekutengesa yekutengesa, cafe, bistro, pubs, nezvimwe.
Bata Bindu Sachigaro nehupamhi hwepamusoro mhando, 100% ruoko-rwakarukwa nevane hunyanzvi mhizha.
Saizvozvo dhizaini yekutengesa kunze Textilene Mesh Chairs inowanikwa.
Resin Wicker Sachigaro Bindu Rattan Chairs ane Bamboo-aifarira Sisitimu ndeimwe yeakanyanya kutsigisa epanze patio yekudyira chigaro. Zvese zvigaro uye kumashure zvakarukwa ne PE rattan. Tambo yepurasitiki yekugadzira iri padyo padyo neyakajairwa rattan, asi inogona kushandiswa kwenguva yakareba pasi pezuva. Kazhinji, inogona kushandiswa kweanopfuura maawa 2000. Nekuda kweiyo UV inopikisa, iyo rattan wicker chair isarudzo yakanaka seFrance bistro cheya yeresitorendi, cyber café, hotera uye imwe nzvimbo yekudyira.
Aluminium cast furemu ine bamboo-tarisa kupenda, yakakwana waya uye polish inoita kuti ive yakanaka mushana. Iyo simbi furemu inoita kuti cheya ive inorema kurema, inokwanisika uye nyore kuchengeta. Iyo poda kupfeka kupedzisa inobatsira yakasarudzika chitarisiko neakasimba mamiriro.Sun tenzi wekunze fenicha mugadziri ane vanopfuura zana vane ruzivo vashandi mukuruka dhipatimendi. Vazhinji vavo vane makore anopfuura gumi 'ruzivo mukunze fenicha kugadzira. Hunyanzvi hwekugadzira uye hwakagadzirwa nemaoko hunochengetedza fenicha yedu kuti isadzike uye yakatambanuka.
Patio Furniture Wicker Kunze Kudya zvigaro zvemukati nekunze nemaviri-toni tara rattan yakarukwa pane yemishenjere-tarisa aluminium furemu. Kurudzira vashanyi vako kuti vagare pasi uye vanwe zvinwiwa zvakanyanya kana kudya neiyi inoshanda synthetic rattan uye yemishenjere yekutengesa zvigaro zvekunze. Inoitirwa pekugara pakanaka pakudya.
Sun Master haingori yeOEM & ODM fekitori ine makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo rwehunyanzvi mufenicha yekunze, asi fekitori inehunyanzvi inoramba ichitangisa mhando nyowani mwaka wega. Takawana BSCI uye iyo ISO9001: 2015. Misika yedu yekutengesa kunze kwenyika inonyanya kuve United States uye nyika dzeEurope kwemakore makumi maviri.
Yese fenicha yedu yekunze inokodzera neSGS bvunzo. Isu tine yakasimba kwazvo sarudzo yekutora kune yedu mbishi zvinhu zvekutengesa, kuitira kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro uye zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinhu pakutanga chaipo.
Kana iwe uchida yemahara sampuro, katalog ine pricelist. Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu neemail: terry@sunmaster.cn susan@sunmaster.cn isu tiri kupfuura vanofara kupa rubatsiro mune ramangwana.
Pashure: Yemazuva Ekunze Kunze Tambo Yakarukwa Sofa Yakagadzika 4-Chidimbu Aluminium Cast Chimiro Patio Kukurukurirana Sachigaro Nemakusheni Eakasiyana Mitezo Yekugara Kamuri.
Zvadaro: Yemazuva Ano Dhizaini Yepamusoro Aluminium epurasitiki Wood Sachigaro Simbi Yakagadzwa Kunze Patio Kudya Chigaro chechairi 4-Piece Bindu Tafura Yekutengesa Fenicha Set
Wholesale Modern Wicker Rattan Chair Chair Resin Pe W ...
Chaise Lounge Kunze kwesimbi Simbi Fenicha Patio Syn ...
Modern Outdoor Garden Rope rakarukwa pasofa Plastic P ...
Contemporary Outdoor Office Furniture pasofa Set ...
Yemazuva ano Dhizaini Yemhando Aluminium Plastiki Woo ...
Chinyakare Classical Kunze Furniuture Rattan ...